ကျွန်ုပ်တို့၏ကားများသို့အကြောင်းအရာများကိုမောင်းနှင်ခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2019 NAB ပြရန် » ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားသို့ကားမောင်းအကြောင်းအရာ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမော်တော်ကားဖျော်ဖြေရေးစျေးကွက်ရောက်ရှိရန်မျှော်မှန်းထားခြင်းဖြစ်သည် $ 40.17 ဘီလီယံအထိ 2024 အားဖြင့် In-မော်တော်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေးအဘို့အမြင့်တက်စားသုံးသူဝယ်လိုအား၏ရလဒ်အဖြစ်။ တိုးတက်လာသောဆက်သွယ်မှုနဲ့ 5G များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှု၏ကျယ်ပြန့်ရရှိမှုအပါအဝင်အနာဂတ်အတွက်ကားတစ်စီးန်ဆောင်မှုများအတွက်လမ်းနေကြသည် မာလ်တီမီဒီယာ နဲ့ဖျော်ဖြေရေးန်ဆောင်မှုများ - ယခင်ကထက်ပိုမိုခေတ်မီဖျော်ဖြေရေးစနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှဦးဆောင်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှုများမြင့်တက်ခရီးသည်ယခင်ကတတ်နိုင်သမျှထက်ဖျော်ဖြေရေးကိုစားသုံးဖို့ပိုပြီးအခမဲ့အချိန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်အချက်များသူတို့ယခင်ကချက်များမရရှိခဲ့ကြနေရာများအတွက်စားသုံးသူရောက်ရှိဖို့အကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းအတွက် - အမည်ရ, မော်တော်ယာဉ်များရွေ့လျား။ သို့သျောလညျး, content တွေကိုဖန်တီးသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူတို့ကားအတွင်းပိုင်းသူတို့ရဲ့တည်ဆဲပူဇော်သက္ကာကိုပုံတူပွားနိုင်မယူဆသဖြင့်လွယ်ကူသောအမှားလုပ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီအစား, သူတို့ကအလတ်စားသူတို့ရဲ့ content တွေကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်ကြည့်ရှုသူသစ္စာရှိမှုတညျဆောကျဖို့ဒီအခွင့်အလမ်းတိုးမြှင်သငျ့သညျ။
အများအပြားခရီးသည်ပြီးသားသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး devices များ (BYOD) ရက်နေ့တွင် Pre-ဆွဲယူတဲ့ဗီဒီယိုကိုအတူလမ်းမပေါ်တွင်အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုသည်အတိုင်းကားထဲတွင်အကြောင်းအရာစားသုံးအသစ်တစ်ခုဖြစ်ရပ်ဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ကားကနေတဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအမျိုးအစားဖြစ်ပေါ်နေသောဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ကားများကြီးမားတဲ့ဖန်သားပြင်နှင့် voice လက်ထောက်အသစ်ပတ်ဝန်းကျင်သို့၎င်းတို့၏လမ်းလုပ်နေပါတယ်တပ်ဆင်ထားကြသည်။ စားသုံးသူ B ကိုမှ A ကနေသွားရမယ့်ကားတစ်စီးကိုအသုံးပြုနေသောအယူအဆနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သောအခါအကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းအရာအားလုံးအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နှင့်မြင့်မားသောကိုယ်ပိုင်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးလုံးဝကမ္ဘာသစ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ဒီအခွင့်အလမ်းတိုးမြှင့်ဖို့, အကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့်အတူပူးပေါင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့သောမိတ်ဖက်စားသုံးသူနဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်ရန်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူကို enable, ဒါပေမယ့်လည်း content တွေကိုစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးစျေးကွက်သစ်ရိုက်ထည့်ပါနှင့်အသစ်ဝင်ငွေစီးကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ကြေညာသူမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍဝင်နဲ့ content ရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းရန်ကိုကြည့်အမျှသူတို့ content ကိုငွေရှာခြင်းအတွက်တစ်ဝှမ်းစီးပွားဖြစ်မူဘောင်ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးသူတို့မရှိတော့ဝါးဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လိမ့်မည်: ကားတစ်စီးထုတ်လုပ်သူအကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းသူတို့၏ပူဇော်သက္ကာကိုသေချာစေရန်ကားထုတ်လုပ်သူများနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်, ဆိုလိုတာကအကြောင်းအရာ Catalog ၏ပုံသဏ္ဍာန်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နှင့်၎င်းတို့၏ရွေ့လျားနေသောဖန်သားပြင်၏အတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုသိလို အခုအသစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအလွန်တိကျသောလိုအပ်ချက်များကိုက်ညီ။ ခွကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ဧည့်ခန်းတွင်သို့မဟုတ်တောင်မှသွားလာရင်းရင်ဆိုင်ရအတွေ့အကြုံရန်, ယာဉ်အတွင်းပိုင်းကိုလောင်မဆိုဗီဒီယိုခရီးမှချိန်ညှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်, ဒီသီးသန့်အကြောင်းအရာငွေရှာခြင်းအတွက်လမ်းသစ်မှဦးဆောင်, ဒီအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကအသုံးပြုမှုကိစ္စတွင်ကိုက်ညီဖို့ rethinking ပုံစံများကိုဆိုလိုသည်။
အကြောင်းအရာရှင်ဘုရင်ဖြစ်, butit ထဲမှာ-ကားတစ်စီးဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကိုအုပ်စိုးဖို့ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ပါတယ်လိမ့်မည်။ ယနေ့စျေးကွက်မှလာမယ့်အများဆုံးကားများဆက်သွယ်မှုအချို့ကိုပုံစံတပ်ဆင်ထားကြသည် in:-ကားတစ်စီးကို Wi-Fi နှင့် 4G လက်ရှိအသုံးအများဆုံး options များဖြစ်ကြသည်။ ဒီအပြင်, ထိုကဲ့သို့သောစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ကဲ့သို့သောအခြားချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေ, plug နှင့်ကစားရန်စွမ်းရည်, ကားအတွင်းပိုင်းအဖြစ်သွားလာရင်းသူတို့ရဲ့ Pre-တည်ဆဲ data တွေကိုအစီအစဉ်ကိုသုံးစွဲဖို့စားသုံးသူများနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်တို့အပါအဝင် In-ကားတစ်စီးန်ဆောင်မှုများနှင့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုအရေအတွက် access ကိုရိုးရှင်းစွာ မာလ်တီမီဒီယာ မိုဃ်းတိမ်မှတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ကြောင်းဖျော်ဖြေရေးနှင့်ငွေပေးချေမှုန်ဆောင်မှု။
ဤနေ့စွဲကိုရန်လုံလောက်သောသက်သေပြခဲ့ကြပေမည်, သို့သော်အနာဂတ် ပို. ပင်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်: 5G ကားများထွက်လှိမ့်ခံရဖို့အလုံအလောက်တည်ငြိမ်တခါ, ဒီဖျော်ဖြေရေးကယ်လွှတ်ခြင်းငှါစွမ်းရည်အတွက်အဓိကတိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ခရီးသည်မဆိုသုံးနေပြီမပါဘဲ Temple Run play နိုင်ပါလိမ့်မည်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစားနောက်ဆုံးတော့သေးငယ်ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ pixelated ကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်မိဘများမရှိတော့သည့် backseat အတွက်စိတ်ပျက်ကလေးတွေနဲ့အတူလွှတ်ပေးခြင်းဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်, စိတ်မရှည်ပေါ်မှာ load မှအံ့ဖွယ်ခြေးပိုးထိုး၏နောက်ဇာတ်လမ်းတွဲဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ နောက်ဘက်ထိုင်ခုံဖျော်ဖြေရေးဖန်သားပြင်။
အဆိုပါကားကိုစက်မှုလုပ်ငန်းပြီးသားအပြည့်အဝဆက်သွယ်မှုဆီသို့ဦးတည်ကြီးအတိုးတက်မှုအောင်သည်, အကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းအိမ်ထက် ကျော်လွန်. က၎င်း၏လက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့ဖို့ဒီလမ်းကြောင်းသစ်မူတည်ပြီးနိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာတိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူမှာထုတ်ဖော်ပြသခံရဖို့ - အခုတော့ခရီးကိုက်ညီမယ့် format နဲ့ရရှိနိုင်ကြည့်ရှုသူများ '' လိုအပ်ချက်များနှင့်အကျိုးစီးပွားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အမှန်တကယ်စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်စပ်ခံရဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည် NAB ပြရန် နှင့်ကျော်လွန်ပြီး။
အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူလည်းကားတစ်စီးဟက်ကာနှင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတတိယပါတီက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာအကြောင်းအရာအလားအလာတရားမဝင် Re-streaming များအပါအဝင်စိန်ခေါ်မှုများ, လာပါတယ်။ ဒီစိန်ခေါ်မှုကအလွန်မှန်ကန်သည်နှင့်ဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်နေစဉ်, ကကားအတွင်းမှအကြောင်းအရာပေးအနေဖြင့်အကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းတားဆီးသင့်ပါဘူး။ နှစ်ဦးစလုံးအတွက်-built နှင့် (BYOD) တွင်ယူဆောင် - အထူးသ In-ကားတစ်စီးပတ်ဝန်းကျင်မှာများအတွက်ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးဖြေရှင်းနည်းများပြီးသားဗီဒီယိုကားအတွင်းပိုင်းအားလုံးဖန်သားပြင်မှလုံလုံခြုံခြုံကိုအပ်သည်ကိုသေချာစေရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Plus အား, တင်းကျပ်သောအကြောင်းအရာကာကွယ်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကားကိုထုတ်လုပ်သူကိုလိုက်နာဖို့လိုအပျကွောငျးအခွင့်အရေးများစီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက်ခိုင်မာသောအခြေခံမူဘောင်ပြီးသားရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းအရာ, ဦးတည်ရာကိရိယာဒေသနှင့်ဖြန့်ဝေနည်းလမ်းအသီးအသီးအပိုင်းအစများအတွက်ခြားနားသည်။ အဆိုပါမော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းပြီးသားမော်တော်ယာဉ်များသည်ဤလိုအပ်ချက်နှင့်အတူလိုက်နာသော်လည်း, ပိုပြီးပညာရေးထပ်မံပူးပေါင်းနှစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဖြစ်ပျက်ရန်လိုအပ်သည်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြေရှင်းချက်သို့ကြည့်မျှော်နေပါတယ်။
ပိုမိုမြင့်မားသောအကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းများအတွက်ကြီးထွားလာစားသုံးသူဝယ်လိုအားနှင့်တကွ, စက်မှုလုပ်ငန်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤအဈေးကွက်အပြောင်းအလဲများတုံ့ပြန်ရန်အကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်မော်တော်ကားနှစ်ဦးစလုံးအသစ်ငွေရှာခြင်းအတွက်အလားအလာဖန်တီး AMD လျစ်လျူရှုမရသင့်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်တွင်ပုံမှန်နှုန်းမှာကြီးထွားလာသောဤစျေးကွက်သစ်, အနာဂါတ်ကာလတွင်အတွက်ကြီးမားပါလိမ့်မည်နဲ့ content ဖန်တီးသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ဖို့မသငျ့သညျ။
ACCESS ဥရောပ In-မော်တော်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေးနဲ့ content နှင့် In-ကားတစ်စီးန်ဆောင်မှုနောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေးစံချိန်စံညွှန်းကိုထောက်ပံ့သောဖြေရှင်းနည်းများဘို့လိုအပ်ကြောင်းဆွေးနွေးရန် NAB 2019 မှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ACCESS hosting ပါလိမ့်မည် 8 မှာဧပြီလ2အပေါ်တစ်ဦး session တစ်ခု: 00 - 2: 20pm PT ကို 'In-မော်တော်ယာဉ်အတွေ့အကြုံကို' 'ပြဇာတ်ရုံ (မြောက်ပိုင်းခန်းမ, N3811) ၌တည်၏။
ဒေါက်တာ Neal Foster အကြောင်း: ဒေါက်တာ Neal Foster သူကုမ္ပဏီ၏ညှနျကွား steers ဘယ်မှာ ACCESS ဥရောပ၏ CEO တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Neal ACCESS ဥရောပဦးဆောင်သူ၏အခန်းကဏ္ဍမှတီဗီ, စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွေ့အကြုံကိုချိတ်ဆက်, ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဥစ္စာဓနတတ်၏။ ACCESS CO ။ , LTD မှ။ တယ်လီသယ်ဆောင်, စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ထုတ်လုပ်သူ, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေကုမ္ပဏီများ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့်စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံပံ့ပိုးပေးဖို့မိုဘိုင်းနှင့်ကွန်ယက်ကို software များကိုနည်းပညာများတဝိုက်ဗဟိုပြုခေတ်မီအိုင်တီဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 1.5 ဘီလီယံခန့် devices များနှင့် 300 ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူကျော်ကအသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်းကွန်ရက်က software ကိုဖြေရှင်းချက်ကျော်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီမိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ သူ့ရဲ့ network က virtualization နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာအသုံးချဖို့, ကုမ္ပဏီသည်လက်ရှိတွင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စီးပွားရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသည်
ပါဝင်သောနဲ့ cloud နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ကြောင်းအရာ (IoT) နှင့်မီဒီယာဖြေရှင်းချက်၏အင်တာနက်က။
2015 2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး ဆူညံသံလျော့ချခြင်း UHD / 4K / HD ကို viarte Warsaw ကို 2019-03-21
ယခင်: Cartoni NAB 25 မှာအထင်ကရအနက်ရောင်နှင့်ရွှေဒီဇိုင်းအသစ်မာစတာ 2019 အရည်ခေါင်းကိုလွှတ်တင်
နောက်တစ်ခု: ဒီဇိုင်နာ, အကြောင်းအရာ & ဒီဇိုင်းန်ဆောင်မှုများ